नेप्सेमा मात्र ९३ करोडको कारोबार, १५ अङ्कको गिरावट ! - Laltin Media
Home»सेयर बजार»नेप्सेमा मात्र ९३ करोडको कारोबार, १५ अङ्कको गिरावट !
नेप्सेमा मात्र ९३ करोडको कारोबार, १५ अङ्कको गिरावट !
आज शुक्रबार १५.८२ अंकले घटेर ०.७०% गिरावटको साथ नेप्से परिसूचक २२३५.०९अंकमा बन्द भएको छ। कारोबार भएका २२३ कम्पनीमध्ये ४१ कम्पनी उकालो लागेका छन्, १३९ कम्पनी ओरालो लागेका छन् भने १२ कम्पनी स्थिर रहेका छन्।
कारोबार भएका तेह्र उप-समूहमध्ये १ उप-समुहको सेयर मूल्य मात्र उकालो लागेका छ भने बाँकी १२ उप-समुहहरुको सेयर मूल्य ओरालो लागेका छन्।
NEPSE Daily Update: May 20, 2022
आज बोलिन्जर ब्याण्डको अपर र लोवर ब्याण्डको अन्तर बढेको विश्लेषणले देखाउँछ (आजको फरकः२१७) जसले बजारमा भोलाटाइलिटी बढेको इङ्गित गर्दछ। बजार आज लोवर ब्याण्ड भन्दा माथि २२३५ मा बन्द भएको छ। आज पनि बजारमा सामान्य बिक्री चाप बढेको देखिन्छ।
मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स विश्लेषणले एमएसिडि लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -५४ मा आएको देखिन्छ। हिस्टोग्राम पोजेटिभ ४ बाट घटेर २ मा आएको छ जुन हिजोको भन्दा सानो बनेको छ। एमएसिडी लाइनले माथि बाट तल तिर सिग्नल लाइन लाइ क्रस गर्न तल तिर फर्किएको छ। सिग्नल लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -५६ आएको छ। समग्र मुभिङ्ग एभरेजलाई हेर्दा बजारमा आज बिक्रीको मोमेन्टम बढेको देखिन्छ।
डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डिकेटरले आज +१४ डिएमआई लाइन तलतिर फर्किएको छ भने -१४ डिएमआई माथि फर्किएको छ। सिग्नल लाइन आज स्थिर जस्तो देखिएको छ र +१४डीएमआई लाइनले सिग्नल लाइन लाई क्रस गर्न गएको देखिन्छ। आज – १४ डिएमआई लाइन माथि फर्किएको छ जसले बिक्री केहि बढेको जनाउँछ।
आज नेप्सेले बियरिश क्यान्डल बनाएको छ जसले बजारमा बिक्री बढी भएको जनाउँछ।
क्युमुलेटिभ एडी लाइन -५०४५ देखि घटेर -५१४३ मा आएको छ। नेप्सेको कुल भोल्युम १९३०३३४ रहेको छ जुन २१ दिन मुभिङ एभरेज भोल्युम(३१९२७४३) को ६० प्रतिशत देखिएको छ।
नेप्से आज लोवर ब्याण्ड भन्दा माथि २२३५ मा क्लोज भएको छ। एमएसिडी लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -५४ मा आएको छ र सिग्नल लाईन पनि जिरो लाइन तल -५६ मा देखिएको छ भने हिस्टोग्राम हिजो भन्दा घटेको छ र पोजेटिभ २ मा पुगेको छ जसले बजारमा खरिद कम भएको बुझ्न सकिन्छ।
-१४ डिएमआई लाइन आज माथि फर्किएको छ भने +१४ डिएमआई लाईन निरन्तर तल तिर लागेको छ र सिग्नल लाइन – १४ डीएमआई लाइनलाइ छोएर पुनः तलतिर निरन्तर लागिरहेको थियो, आज +१४डीएमआई लाइनले सिग्नल लाइन लाइ माथि बाट क्रस गर्न खोजेको देकाएको छ। आज बजारमा खरिदकर्ताको मोमेन्टम कम रहेको सङ्केत गर्छ। आरएसआइ आज ३७ बाट घटेर ३५ मा पुगेको छ आरएसआइको मोमेन्टम घटेको जनाउँछ।
नेप्सेको आगामी दिनको नजिकको सपोर्ट २२३८ देखिन्छ भने नेप्सेको नजिकको अवरोध २२८२ को एरिया रहेको देखिन्छ।#nepsetech
राप्ती हाइड्रोको आइपिओ निष्काशन असार २९ गतेदेखि
नेपाल डिपि लिमिटेडद्धारा डिम्याट र मेरो सेयरको वार्षिक शुल्क बुझाउन आग्रह